ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Rabies vaccine)သည် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စိတ်ချရပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိသော ကာကွယ်ဆေးအမျိုးပေါင်းများစွာရှိသည်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် မထိတွေ့ခင် သို့မဟုတ် ခွေး၊လင်းနို့ အကိုက်ခံရ၍ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်ထိတွေ့ပြီးလျှင် ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်သည်။ အကြိမ်ပေါင်း(၃)ကြိမ်ထိုးပြီးလျှင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်သည့်ခုခံအားကို အချိန်ကြာရှည်စွာရရှိနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အရေပြား သို့မဟုတ် ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးနှံရသည်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် ထိတွေ့ပြီးပါက ဤကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကို ခုခံပေးသောပဋိပစ္စည်း (immunoglobulin)ကိုပါ ပေးရသည်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများသည် ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြိုတင်ထိုးနှံထားသင့်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးသည် လူနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များတွင်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ခွေးများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် လူများသို့ခွေးရူးပြန်ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အသက်အရွယ်မရွေး လူတိုင်းတွင် စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူပေါင်း(၃၅-၄၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်၌ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နီရဲခြင်းနှင့် နာကျဉ်ခြင်းတို့ ခဏတာဖြစ်တတ်သည်။ (၅-၁၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ကိုယ်ပူခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ပျို့တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သော လူတိုင်းသည် ဤကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သည်။ ကာကွယ်ဆေးအများစုတွင် သာမီရိုစယ်(thimerosal)ဟုခေါ်သော ကြာရှည်ခံအောင်ထိန်းသိမ်းသည့်ပစ္စည်း မပါဝင်ပါ။ အာရုံကြောတစ်ရှူးမှ ပြုလုပ်သော ကာကွယ်ဆေးကို အာရှတိုက်နှင့် လက်တင်အမေရိကတိုက်ရှိ တချို့နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းဆေးမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်း၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းဆေးများကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အသုံးပြုရန်မသင့်ဟု အကြံပြုထားသည်။
(၁၈၈၅)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၎င်းထက်ပိုကောင်းသော အမျိုးအစားများ (၁၉၀၈)ခုနှစ်တွင် ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသန်းပေါင်းများစွာကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပြီး (၂)သိန်းခွဲကျော်ခန့်လူများ၏အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဆေးပတ်လည်အောင်ထိုးရန် လက်ကားဈေး (၄၄-၇၈)ဒေါ်လာခန့် ကုန်ကျနိုင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဆေးပတ်လည်အောင်ထိုးရန် ဒေါ်လာ(၇၅၀)နှင့်အထက် ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ "Rabies vaccines: WHO position paper" (Aug 6, 2010). Weekly epidemiological record 32 (85): 309–320.
↑ Nunnally၊ Brian (2014)။ Vaccine Analysis: Strategies, Principles, and Control။ Springer။ p. 63။ ISBN 9783662450246။
↑ Vaccine, Rabies။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perspectives: Intradermal Rabies Preexposure Immunization (June 30, 2015)။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=341750" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။